Apple Music inotanga kuve musoro weSpotify, uyo anoda kubhadhara zvishoma kune maartist | IPhone nhau
Apple Music iri kutanga kuve musoro weSpotify, uyo anoda kubhadhara maartist mashoma
When Spotify Iye akaziva kuti Apple yaivhura mimhanzi yekushambadzira sevhisi uye akati haana kana hanya nazvo. Muchokwadi, mambo wekushambadzira mimhanzi masevhisi ikozvino ave nevashandisi vazhinji kupfuura nakare kose, chimwe chinhu icho Apple Music, sevhisi yakatangwa nevari muCupertino izvo zvino pfuurei gore rapfuura, yakapa. Asi izvi zvinogona kuchinja kana kutaurirana pakati peSpotify nemakambani enhoroondo kusachinja mafambiro.
Dambudziko nderekuti kukurukurirana pakati peSpotify nemakambani matatu makuru rekodhi haasi munzira chaiyo. Iyo Chikonzero chikuru iApple Music, sevhisi iyo inobhadhara zvakati kwirei zana kupfuura chero yemakwikwi sevhisi uye izvo, zvine musoro, inokwezva kutarisa kwemakambani rekodhi, ayo anogona kupedzisira achisarudzira sevhisi yeApple chero papi zvapo paine zvakasarudzika zvemukati zvinofanirwa kuburitswa.
Spotify inoda kubhadhara zvinyorwa zvinyorwa 5% zvishoma
Apple Music iri kubhadhara 58% yemabhenefiti kurekodha makambani mushure memwedzi mitatu yemahara yakapihwa nebasa raApple. Iwo matatu ekutanga mazita - Sony, Universal Music Group uye Warner Music Group - vanoda Spotify kuti ifanane nechipiriso chaApple, asi vekare veteran yekushambadzira sevhisi inoita kunge isingawirirane.
Kuti iite sevhisi inobatsira, Spotify inoda donha kubva ku55% iyo inobhadhara makambani rekodhi kuenda ku50% izvo zvingave zviri pasi pe8% pane izvo zvinopihwa neApple Music. Kune rimwe divi, iwe zvakare unodawo kuwana zvakasarudzika nemaartist, asi izvi hazvizove basa rakareruka kana tikafunga nezve 8% mutsauko.
Chero zvazvingaitika, kunyangwe kutaurirana pakati peSpotify nemakambani ekurekodha kusingapfuure nenguva yakanaka, mapato ese ari maviri anoramba aine tarisiro, izvo zvingangopedza kutenderera kweyemhanzi sevhisi inoenderana nekupihwa kwaApple. Chinhu chakashata chekambani yeSweden ndechekuti kuita izvi kuchaita kuti sevhisi yako ive shoma shoma kupfuura zvawaitarisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple Music iri kutanga kuve musoro weSpotify, uyo anoda kubhadhara maartist mashoma
Apple patent inotsanangura chinongedzo chekufambisa chakavakirwa paAugmented Reality